Maraykanka oo ka hadlay xabad joojinta Itoobiya farriina u diray ciidanka Eritrea.
June 30, 2021 Xuseen 2
Ned Price Afhayeenada Waaxda Arrimaha Dibedda Maraykanka, ayaa waxa ay sheegtay inay tallaabo wanaagsan they Xabbad-joojinta ay Dowladda Ethiopia ku dhawaaqday, isla markaana ay wax ka bedeli karto Xaalladda dhulka ee dagaalka Gobalka Tigraygaj.
Afhayeenada Waaxda Arrimaha Dibedda Maraykanka, waxa ay intaasi ku darday inay si dhow ula socon doonaan Horumarada ku soo kordho arrintaasi, iyadoo ugu baaqday dhamaan dhinacyada ku dagaalamaya Ethiopia inay sida ugu dhaqsaha ah uga heshiiyaan Xabbad-joojinta, dib loo soo celiyo Deganaanshaha Gobalka Tigrayga iyo in Samafalka la gaarsiiyo dadka u baahan.
Dhanka kalena, afhayeenka ayaa waxay ku boorisay Dowladda Federalka Ethiopia inay sida ugu dhaqsaha badan dib loo soo celiyo Adeega Isgaarsiinta ee Gobalka Tigrayga, Xorriyada Dhaqdhaqaaqa iyo in la damaanad qaado Badqabka Ammaanka ee Shaqaalaha Hawlaha Samafalka ee Gobalka Tigrayga.
Ugu dambayntiina Ned Price waxa ay xustay inuu Maamulka Madaxweyne Biden ugu baaqay inay Eritrea sida ugu dhaqsaha badan Ciiddankooda ugala baxaan xuduudka Ethiopia, taasi oo muhiim u ah dhowrista Xabbad-joojinta Tigrayga.
War yaadiheee .. wariyo war ba ma hayo..
Maxaa waayee, xabad joojinta aad ka hadleeyso.. Inta aad soo xiganayso gabadh ka hadashay WASHINGTON, maad ka hadasho waxaa dhulka yaal ee xaqiiqdada ah.
Yaa ERITERIA ugu baaqay in ay ciidamadeeda kala baxdo TIGRAAY? Miyaadan la socon xasuuqa ka socda magaalada RAAMA ee xaduudka TIGRAAY iyo ERITERIA? Ciidamadii ERITERIA saaxiiboww waxeey ku jidhaan (O). Meel kasta waa laga xirtay. Meel ay u cararaan waa la’yiheen.. Waa loo soo gurman waayey. Waxaana laga yaabaa 40,000 ciidanka ERITERIA in la xasuuqo. 30,000 waa la soo xasuuqay.. dhamaan ciidamada eriteria oo TIGRAAY soo galay waxeey ahaayeen ilaa 70,000 oo askari.
Ku farax ama ka naxa, dhamaan dhulkii TIGRAAY waa xor oo dhamaan ciidamadii soo galay waxna waa la dilay, waxna weey carareen..
Waaa maxeey tallabada xigta oo TPFL ay sameen karto??
1. Marka hore waxeey sameenaysa in ay hubiso dhamaan dhulkii TIGRAAY oo xor ah oo maamulo loo sameeyo. Dadii dib loo dejiyo. Amaanka la suggo.
2. Midda labaad, waa in uu is-casila Abiy Axmed Cali, oo isugu yeedhaa dhammaan xisbiyada mucaaradka oo ay kow ka yiheen TPFL iyo OROMADA iyo AMXAARADA, se ay u soo dhisaan dawlad ku-meel-gaar ah.
3. Hadii uu Abiy Axmed uu is-casilin waayo, waxaa dhacaya in xoogaga mucaaradka ee TPFL iyo OROMADA, MASHANGUULKA ay xoog kula wareegaan oo ay qabsadaan ADDISABABA, isla markaasna ay dawlad ku-meel-gaar ah soo dhistaan, oo ay hogaaminayso TPFL.
4. Hadii AMXAARO ay dagaalka soo gasho oo ay daafacdo Abiy Axmed, waxaa fooda is-darayaa TPFL iyo AMXAARO..
5. AMXAARONA waa la jebin doona, waayo, SHACABKA ETHIOPIA aa AMXAARADA u wada ciil qabta.. AMXAARADA dhabark aa laga tooganaa, dawladna waa lagu dhul dhisana.
Don’t hurry. Let us wait and we shall see what will be happening in the coming few days.
waxaad u hadashay sidii lo’
puntland joogta oo wax laga waydiiyay ethiopia 🇪🇹 kkkkkkkk war iska aamu,
alow hana ceebeen.